EMBA.cz Paseky nad Jizerou Czech Republic - PetrPikora.com
PetrPikora.com on Febraayo 3, 2019
EMBA waa shirkad Czech ah oo leh caado waqti dheer ah iyo dabeecad mas'uulka ka ah bulshada iyo deegaanka. Waxyaabaha bey'adda ku haboon bey'ada waxaa lagu soo saaraa waraaqo waraaq ah oo ay gabi ahaanba dib u cusboneysiin karaan. Iyadoo loo marayo alaabteeda, EMBA waxay gacan ka geysaneysaa ilaalinta iyo ilaalinta hiddaha dhaqameed iyo taariikheed ee dalal badan. Maadaama uu yahay shaqeeye muhiim u ah gobolka, wuxuu dareemayaa mas'uuliyad ka saaran horumarinta xaalado shaqo oo waaraya oo ammaan ah shaqaalahooda iyo sidoo kale balanqaadkeeda ah in ay gacan ka geystaan ​​xasilloonida bulshada ee gobolka oo dhan.
EMBA - FASAX KA QAADIN DOORKA
Bilowgii warshadihii ugu dambeeyay ee ku yaala Paseky nad Jizerou waxay dib ugu noqotaa 1882 markii Walaalaha Rössler uu aasaasay warshad loogu talagalay soosaarka waraaqaha madadaalada ah ee loogu talagalay in lagu soo saaro wax soo saarka warshadaha samaynta ee gobolka Jablonec. Xilliga dambe ee nolosha ee shirkadda waxaa lagu gartaa kordhinta barnaamijka wax soo saarka iyo dhismaha wax soo saarka.
Dhacdooyinka muhiimka ah ee taariikhda warshadaha daba-galka ah waxaa ku jira gaar ahaan rakibidda mashiinnada mashiinada mashiinada ah ee 1970 iyo 1989 taasoo horseedaysa koror kala duwanaansho wax-soo-saarka. 1990s, horumarinta golayaasha aruurinta ee diiwaangelinta dhamaystiran ee dokumintiyada ganacsiga iyo dukumiintiyada muhiimadda dhaqameed iyo taariikhiga ah ayaa la bilaabay, horeyba EMBA calaamad. Milyan sannadka cusub, wax soo saarka faylalka waxaa lagu dhameeyay khadadka loogu talagalay wax soo saarka feylasha laydhka.
Waxaan ka warqabnaa hanti qarniyadii hore ee nagu hoggaamiyay maalmahan iyo ballanqaadkayaga si aan ku guuleysanno horumarinta shaqada bilaabatay. Dadaalka joogtada ah ee aan ku noqono hal talaabo ka hor tartamayaasha, waxaanu xoogga saarnaa tayada alaabada iyo xiriirka aan la leenahay macaamiisha.
Khibradda iyo aqoonta sare ee shaqaalaheenna ayaa ah dammaanad mudda dheer oo ah heerka adeegga ugu sarreeya. Ma aha oo kaliya iibinta alaabta laakiin siinta xalal dhameystiran macaamiisha in ka badan dalalka 30 oo dhan adduunka oo dhan.
Anshaxa waa mid ka mid ah sharciyada ugu sareeya ee xiriirka gudaha iyo dibaddaba
Adeegga macquulka ah iyo adeegga macaamiisha ayaa ah waajibaadkayaga caddaynaya.
Ka qaybqaadashadeena tayada nolosha bulshada oo dhan kuma koobna shirkadaha shirkadda.
Shaqada ugu sarreysa ayaa waxay ka dhigeysaa waxkaceenkayaga horumarinta horumarka gobolka.
EMBA wuxuu si weyn u dhexgalaa sadaqada iyo goobaha bulshada. Waxay taageertaa mashaariicda faa'iido leh ee la taaban karo leh saameynta maxalliga ah iyo weliba hawlaha ku sii fidaya xudduuda Czech Republic.
EMBA wuxuu ku guuleystay wareeggii gobol ee FASAXYADA EQUAL, tartan heer qaran ah oo loo-shaqeeyayaasha oo fududeeya shaqo isku mid ah dadka naafada ah oo si firfircoon uga qaybqaatay isdhexgalka bulshada.
Aleš kouckýarchivboxarchivbox.czBinderCzech RepublicEMBAemba.czgłaad tekturaglatte Pappekartoonadala soo saarayMarek MichálkoMichálkoPaseky nad Jizerougaliibinta kartoonkasale of warqadkartoon simanxayeysiinlepenek virobawax soo saarka warqadgladкий karttonSvazuющее вещество